रमा सुवेदी | गृहपृष्ठ
Home Archives by: रमा सुवेदी
रमा सुवेदी Articles 56
भारतमा भाजपाको स्पष्ट बहुमत पक्का : नेपालमा के पर्ला प्रभाव ?
on: May 24, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । भारतमा फेरि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन नै अर्को ५ वर्षका लागि सत्तारूढ हुने भएको छ । तल्लो सदन लोकसभाका लागि भएको चरणबद्ध निर्वाचनको बिहीवार सार्वजनिक म...	बिस्तृतमा
सरकारले माया मारेकै हो लिपुलेक ?
on: May 03, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । वैशाख १२ (अप्रिल २५) मा सम्पन्न दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम (बीआरएफ) मा चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले एक नक्सा प्रदर्शनीमा राखेको थियो । जसमा अरुणाचल प्रदेश र समग्र कश्मीर मात्र होइन...	बिस्तृतमा
वर्ष २०७५ का प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय घटना
अघिल्ला वर्षहरूझैं विश्वमा २०७५ साल पनि उतारचढावमय नै रह्यो । यस वर्ष धेरैजसो घटनाको केन्द्रमा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका र चीन रहे । यस वर्षका प्रमुख घटना : ट्रम्प–किम भेटघाट अमेरि...	बिस्तृतमा
वर्ल्ड ह्याप्पिनेश रिपोर्ट २०१९ : बढ्यो नेपालीको खुशीको स्तर
on: March 21, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । नेपालीको खुशीको स्तर बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि ‘सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन्स नेटवर्क’ले सार्वजनिक गरेको ‘वर्ल्ड ह्याप्पिनेश रिपोर्ट २०१९’ले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदन...	बिस्तृतमा
आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा असमान उपस्थिति
on: March 08, 2019 अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
मार्च ८ अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस । १ शताब्दीभन्दा पहिला महिलालाई पनि पुरुषसरह हकअधिकार, सम्मान, समानता र अवसर दिलाउने अभियान अन्तर्गत शुरू भएको यो दिवस अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक...	बिस्तृतमा
३५ भन्दा बढी देशमा गाँजालाई कानूनी मान्यता
on: March 04, 2019 अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
विश्वका धेरैजसो देशमा अहिले पनि गाँजा प्रतिबन्धित छ । प्रतिबन्ध लागेका देशमा गाँजाको औषधीय प्रयोग समेत गैरकानूनी र वर्जित छ । गाँजा प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध उल्लंघन भएको भेटिएमा निकै कठोर...	बिस्तृतमा
भ्रष्टाचार वरियतामा नेपालको स्थान खस्कियो
on: January 30, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । विगत एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार घटेकै छैन । भ्रष्टाचार विरोधी अन्तरराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको ‘करप्शन पर्सेप्शन्स इन्डेक्स (सीपीआई) २०१८’ शीर्ष...	बिस्तृतमा
मोबाइलको प्रयोग बालबालिकाको स्वास्थ्यमा कति हानिकारक ?
on: January 25, 2019 स्वास्थ्य र जीवनशैली
काठमाडौं । संसारभर भइरहेका गतिविधिबारे जान्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन् स्मार्टफोन, कम्प्युटर र ट्याबलेट । यी साधन आधुनिक जीवनको अभिन्न अंग नै बनेका छन् । तर यसका लाभ जति छन्, हानि पनि त्...	बिस्तृतमा
एप्समा लोकेशन ट्र्याक कसरी रोक्ने ?
on: January 07, 2019 प्रविधि
काठमाडौं । स्मार्टफोनमा हामी दिनहुँ दर्जनौं एप चलाउँछौं । तर यीमध्ये कतिपयले प्रयोगकर्ताका हरेक गतिविधिलाई पछ्याएर उनीहरूको निजी विवरण अन्य कम्पनीलाई बेच्ने गरेको खुलासा भएको छ । यसबारे अमेर...	बिस्तृतमा
नयाँ वर्षको चलन (कुन देशमा कसरी मनाइन्छ ?)
on: January 01, 2019 अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
वर्षभर सबै दिन उस्तै हुन्छन् । घण्टा, दिन, महिना र ऋतु फेरिए जस्तै वर्ष पनि फेरिन्छन् । यस क्रममा १ दिनमा त्यति ठूलो परिवर्तन केही हुँदैन । तर पनि हामीले पात्रो अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिनल...	बिस्तृतमा
सूर्या लाइफले बोनसको प्रस्ताव पारित गर्दै (कति प्रतिशत ?)
दक्षिण कोरियाको फ्रेन्चाइज रेस्टुराँ ‘लोट्टेरिया’ नेपाल भित्रियो